Ngwado nke antiviruses Avira na Avast
A ghaghị ịgwọta ụdị antivirus ọ bụla dị ukwuu, n'ihi na nchekwa nke kọmputa gị na data nzuzo na-adabere na ya. Iji chebe usoro ahụ n'ụzọ zuru ezu, ọ dịghịzi mkpa ịzụta antivirus akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na ndị na-azụ n'efu na-anagide ihe ndị ahụ.
Nsogbu wụnye Avast Antivirus: ịchọta ngwọta
A ghaghị ile usoro nke Avast anya dị ka onye isi n'etiti free tools antivirus. Ma, ọ dị mwute ikwu, ụfọdụ ndị ọrụ nwere nsogbu na nwụnye. Ka anyị chọpụta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na adighi etinye Avast? Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ịmaghị ụzọ niile nke ịwụnye ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ, mgbe ahụ, ikekwe ị na-eme ihe na-ezighị ezi mgbe ị wụnye usoro ihe omume ahụ.
Adding exception to Avast Free Antivirus antivirus
Ime ihe n'eziokwu ma ọ bụ igbochi mmemme ndị dị mkpa na ibe weebụ bụ nsogbu nke fọrọ nke nta niile antiviruses. Ma, ọ dị mma, n'ihi ọrụ nke ịgbakwunye ndị ọzọ, enwere ike igbochi ihe mgbochi a. Agaghị egbochi usoro omume na adreesị weebụ site na antivirus. Ka anyị chọpụta otu esi tinye faịlụ na adreesị weebụ gaa na Avast Antivirus.
Nsogbu na mwepụta nke Avast Antivirus: akpata na ngwọta
A ghaghị ile usoro nke Avast anya dị ka otu n'ime ihe kacha mma ma ọ bụ nke kacha mma. Ka o sina dị, nsogbu na-erukwa na ọrụ ya. Enwere ikpe mgbe ngwa ahụ adịghị amalite. Ka anyị chọpụta otu esi edozi nsogbu a. Ịkwụsị nchebe nchebe Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka nchebe Avast anti-virus adịghị amalite bụ iji gbanyụọ otu ma ọ bụ karịa ntanye nke usoro ihe omume ahụ.
Nwepu aha ntinye aha nke onwe: nsogbu na-edozi na ụzọ dị iche iche
Na mbụ, ụlọ ọrụ Avast kpochapụrụ aha ndebanye aha maka ndị ọrụ nke antivirus Avast Free Antivirus 2016, dịka a na-eme ya na nsụgharị nsụgharị nke ọrụ ahụ. Mana ọ bụghị n'oge dị anya gara aga, e weghachiri aha ndebanye aha ahụ. Ugbu a, maka iji antivirus mee ihe otu ugboro n'afọ, ndị ọrụ ga-agafe usoro a.
Na-enwetaghachi Antivirus faịlụ
Mgbe ụfọdụ, e nwere ikpe ndị antiviruses nwere ezigbo ụgha, ha na-ehichapụkwa faịlụ dị mma. O zughi ma ọ bụrụ na ntụrụndụ ma ọ bụ ihe na-abaghị uru na-eme ka ọ bụrụ nke dịpụrụ adịpụ, mana gịnị ma ọ bụrụ na antivirus ehichapụre akwụkwọ dị mkpa ma ọ bụ faịlụ usoro? Ka anyị chọpụta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Avast ehichapụ faịlụ ahụ, na otu esi eweghachi ya.
Ebe nke ịgba ogwu na avast antivirus
Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na achọpụtara ọrụ yiri nje ahụ, antivirus na-eziga faịlụ enyo iji kpooiniini. Mana ọ bụghị onye ọ bụla maara ama ebe ebe a dị, na ihe ọ dị. Kwarantaini bụ ndekọ ụfọdụ echedoro na diski ike ebe antivirus na-enyefe nje na faịlụ enyo, ha na-echekwa ya n'ebe ahụ ezoro ezo, na-etinyeghị nsogbu na usoro ahụ.
Wepu ihe nchọgharị nchọgharị Avast SafeZone
Avast Avast SafeZone Nchọgharị antivirus wuru na ihe nchọgharị bụ ngwá ọrụ dị oké mkpa maka ndị na-eji ihe nzuzo ha egwu ma ọ bụ na-emekarị ego site na Ịntanetị. Ma maka ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji ihe nchọgharị ndị ọzọ na-ewu ewu maka ịwagharị kwa ụbọchị n'Intanet, ọ bụ nanị ihe mgbakwunye na-enweghị isi na antivirus a maara.
Wụnye antivirus software Avast Free Antivirus
N'ụzọ dị mwute, a na-akwụ ụgwọ mmemme antivirus ndị a pụrụ ịdabere na ya. Ihe na-adọrọ mmasị na nke a bụ Avast antivirus, nke bụ Avast Free Antivirus, ọ bụghị ihe dị ukwuu n'azụ nsụgharị nke ngwa a n'ihe gbasara arụmọrụ, na n'ozuzu ọ bụghị dị ala na ntụkwasị obi.
Ngwado nke antiviruses Avast Free Antivirus na Kaspersky Free
Ogologo oge ka ọ na-arụ ụka n'etiti ndị ọrụ nke usoro mmemme nje-ahụ bụ ihe kasị mma ka ọ bụrụ oge. Ma, lee, ọ bụghị naanị ihe gbasara mmasị, n'ihi na ajụjụ dị mkpa nọ n'ihe ize ndụ - ichebe usoro ahụ site na nje na ndị omempụ. Ka anyị tụnyere Avast Free Antivirus na Kaspersky Free antivirus ngwọta ọ bụla ọzọ, na-ekpebi ihe kacha mma.
Gbanyụọ Antivirus Avast
Maka nhazi nke mmemme ụfọdụ, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji gbanyụọ antivirus. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara otú e si gbanyụọ antivirus Avast, ebe ọ bụ na ndị mmepe anaghị arụ ọrụ site na ndị na-emepe emepe na njedebe nke na-azụ ahịa. Ọzọkwa, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-achọ bọtịnụ mgbochi na njikwa ọrụ, ma ha achọtaghị ya, ebe bọtịnụ a adịghị.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ewepụghị Avast
Enwere ikpe mgbe ọ gaghị ekwe omume iwepụ antivirus Avast n'ụzọ dị mma. Nke a nwere ike ime n'ihi ihe dịgasị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na edinyere faịlụ na-ewepu ma ọ bụ ehichapụ ya. Mana tupu ịgbanyere ndị ọkachamara ahụ na arịrịọ ahụ: "Enyemaka, enweghị m ike iwepu Avast!", Ị nwere ike ịnwale iji aka gị dozie ọnọdụ ahụ.
Wepụ antivirus program Avast Free Antivirus
Ịwụnye mmemme antivirus, n'ọtụtụ ọnọdụ, n'ihi na ọ na-adaba adaba na usoro mmeghe, ọ bụghị ihe siri ike, ma site na iwepụ ihe ndị dị otú ahụ, nnukwu nsogbu nwere ike ibili. Dịka ị maara, antivirus na-apụta na ndekọ ndekọ nke usoro ahụ, na ndekọ, na n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ, na mwepụ nke mmemme dị mkpa dị otú ahụ nwere ike inwe mmetụta dị njọ na arụ ọrụ kọmputa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Avast 2020